Qiso Cajiib leh: Fanaan Somali ah Heysta Malaayiin dollar oo 500dollar Xabsi ku galay! Sababta Ogoow - HALDOOR MEDIA
Home SOMALI CELEBRITIES
November 17, 2021 November 17, 2021 Haldoormedia	0 Comments
Fanaan asalkiisu yahay Somali oo wadanka Sweden kunool kuna heesa heesaha Rapka Iswedhishla. Fanaanka ayaa siweyn logga yaqaanaa wadanka Isweedhan kaasoo Heysta Biladaha Ugu waaweyn wadankaan laga bixiyo dhanka heesaha sanadkii. Sidoonkale waxa uu jabiyey rikoodyo badan dhanka Spotify oo heesihiisa siweyn looga dhageysto.
Fanaankaan oo lagu lagacaabo Dree Low ayaa ku dhashay Isweeden Qaasatan Caasimada ee Stockholm. Fanaankaan soomaaliyeed ayaa waxa uu dhigaa show waaweeyn wadanka Isweedhan sidoo kalena heesihiisa waxaa dhageysteek 100Malyan ku dhawaad kaasoo ka hela malaayiin Lacag ah. Mar uu wareysi dhiibay ayuu ku sheegay lacagtiisa ku noolaankaraan asaga iyo ciyaalka uu dhalay kuwey sii dhalee.
Qiso Cajiib ah ayaa ku dhacday fanaanka kaas oo lagu xukumay xabsi sanad ah kadib markii tukaan uu iska soo galay kadibna iska qaatay waxa uu markaas rabay. Fanaanka ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid yahay gangstaryaal xaafda uu ka dagan yahay Caasimada Stockholm kuwaasoo xabado iyo daroogo gada.
Shacabkiisa dhageysta ama daawa ayaa siweeyn ula yaabay Markey arkeen video booliska kusoo qabateen asoo wax xadaya. Muqaalka iyo warbixinta oo faahfaahsan Ka Daawo Muqaalka Hoos yaala.
← Digniin: Aalada Tiktok oo si weyn looga deyriyey iyo Qabyaaladii oo soo noolaatay! Daawo
Wuxuu badbaadiyey naf kale, isagoo naftiisii ku waayay! →